Izitayile ezithandekayo zikaShih Tzu - Inja Ukuzilungisa
Izitayile ezithandekayo zikaShih Tzu
Khetha kwiintlobo ezahlukeneyo zeShih TzuIzimbo zokuzilungiselela inja yakho. Unokufumana inkangeleko ebonisa ubuntu besilwanyana sakho kunye nemvakalelo yakho yesitayile ngokujonga kwakhona iifoto kunye neenkcazo zeShih Tzu.
Kwi injana isikiwe , iinwele zenja zichetyiwe zaya kwi-intshi enye okanye ezi-2 ubude. Oku kunqunyulwa kukwabizwa ngokuba kukunqunyulwa kwehlobo, kwaye kulula ukubona ukuba kutheni kuyintandokazi yale ntoinja encinci. Ukujongwa kokugcina okuphantsi kakhulu okungadingi nto ngaphandle kokuxubha rhoqo kunye nokucheba.
Teddy Bear Sika
Njengokusika injana, kunye ne-teddy bear esikiwe iinwele zikaShih Tzu zachetywa zaya kwi-intshi ezi-1 ukuya kwezi-2 ngexesha lokuzilungisa, kodwa iinwele ziyachetywa zijikeleze ubuso neendlebe ngakwimo ejikelezileyo enokuba mfutshane kancinci. Xa ukusikwa kugqityiwe, inja yakho iya kujongeka kakhulu njengethandekayo iteddy bear . Olu lolunye ulondolozo olusezantsi olulungileyo kwimozulu eshushu. Ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba yi 'pet clip.'
Kwi oku kunqunyulwa Iinwele zenja zishiye ixesha elide kodwa azide zide ngokwendalo. Ubude buxhomekeke kuwe nakwisilumko sakho. Iqhina eliphezulu lenziwa ngokuqokelela iinwele ngentloko yenja kwaye uyibophe ngeribhoni, isaphetha, okanye ikliphu yeenwele. Olu jongo luthatha umsebenzi ongaphezulu kwinxalenye yakho njengoko uzakufuna ukuxubha rhoqo kwaye ukame uboya kwaye ucoce izaphetha njengoko ziphuma. Abanye abagcini kunye nabanini baya kuziluka iinwele kwindawo ephezulu kunye nokuhonjiswa okongezelelweyo. Ukusikwa ngamanye amaxesha kukwabizwa ngokuba yi 'Practical Top Knot.'
Phezulu kweKnot Show Sika
Oku yi ukwahluka kweqhina eliphezulu Oko kwenziwa ikakhulu ngezinja zokubonisa njengoko kuthabatha ixesha kwaye kufuna ulondolozo rhoqo ukugcina inja ingadibani. Idyasi kufuneka ibrashiwe kaninzi ngemini ukuze ihlale ikhazimla. Kule nguqulo, idyasi igcinwa indalo ngokupheleleyo kuyo yonke indawo.
Ingubo emfutshane, Phezulu okupheleleyo
Kwi oku kunqunyulwa , iinwele zenja emzimbeni nasemilenzeni zinqunyulwe, kodwa lasekhohlo lide kumphezulu wentloko, ubuso neendlebe. Iinwele ezindlebeni zinokucwengeka ukuze zikhangeleke ngokupheleleyo, zikhangeleke kakuhle, okanye zikhutshwe ngaphandle kwaye zishiywe zixhomekeke ngokwemvelo.
Ingubo emfutshane, Iindlebe zinde
Oku kuyafana neNgubo emfutshane, ukuKhangela okuPhezulu okupheleleyo kodwa kule meko, umphezulu wentloko nobuso uzilungisile ngokufutshane. Kuphela ziindlebe ezishiyekileyo kwaye zinomaleko okanye zishiywe zendalo.
Oku kusikiwe ikwabizwa ngokuba kukunqunyulwa, okanye iindevu ezinde ezinomzimba ochetyiweyo. Kolu kunqunyulwa, iinwele zobuso benja zishiyeke zendalo ngokupheleleyo ngaphandle kweziqwengana ezimbalwa ezijikeleze amehlo kunye nempumlo ukuba umbono wenja uvaliwe. Umsila, umlenze, kunye noboya bomzimba ziyachetywa kwaye zichetyiwe ukuya kumaxabiso ahlukeneyo. Umzimba kufuneka unqunyulwe mfutshane kunye nomsila ngaphandle kokuphela kokuwunika ukubukeka. Uboya bomlenze kufuneka bucuthwe buye malunga ne-intshi ubude Oku kunqunyulwa kunika inja imbonakalo yengonyama encinci, kungoko igama layo.
Oku kujongeka kukuhle kakhulu apho uzobe khona iinwele ecaleni kwii-ponytails kwaye uzikhusele ngeziqwengana, ngeentolo, okanye ngeebhendi ezincinci zehashe. Ngaphandle kokuthandeka, ikwasebenza njengoko igcina iinwele zabo zingadibani kwaye emehlweni abo.
Kwi le ndlela , iinwele zendlebe yenja zishiywe zinde, kwaye nokuba zenziwe ibrashi, zahlulwe okanye zibotshwe kwizaphetha. Iinwele zomzimba zigcinwa zimfutshane, kwaye iinwele zomlenze zigcinwa zide kwaye zikhutshiwe ukuze zenze ukubukeka okucacileyo. I-stylist inokwenza nokuba iinwele zibukeke zinxantathu okanye zijikeleze ezantsi kunyawo ngenkangeleko engaqhelekanga.
Shih Tzu Ukusikwa kwamadoda nabafazi
UShih Tzus uhlala ebonakala njengowasetyhini ngenxa yeenwele zabo ezinde ezinesilika kunye notyekelo lwabanini lokubeka iirebhoni kunye nezaphetha kubo. Ukuba ufuna ukunika inja yakho inkangeleko ehambelana nokwabelana ngesondo, jonga iinwele zikaShih Tzu zabasetyhini ezinje ngeqhina eliphezulu, ukusika umboniso weqhina eliphezulu, kunye nokusika kweJapan kubandakanya imicu enemibala, iziqwengana kunye neeribhoni. Iinwele zeShih Tzu zamadoda inokuba sisilonda sededdy, ingonyama, okanye injana kwaye uyeke ukusebenzisa izixhobo.
I-Shih Tzu yokuCoca
Ngenxa yeenwele zabo ezinde, ezinesilika, iShih Tzu kufuna ukuzilungisa rhoqo ukuyigcina ingadibani kwaye idibane. Unokukhetha ukubalungisa ukuba banxibe idyasi emfutshane eqhelekileyo kodwa oku kuya kufuna ukubrasha rhoqo kunye nokusika. I-Shih Tzus iyaphalaza nangona iyenza okanye ayixhomekekanga kwindlela ogcina ngayo idyasi yayo. Inja enqumle ixesha elide iya kubonakala ngathi ayiphalazi kuba iinwele ezilahlayo zincamathela kunye neenwele ezinde zedyasi. Ukuxubha rhoqo kususa ezi nwele. Kwelinye icala, inja enqamlezileyo ayizukuchitha yonke indawo njengoko iinwele zabo zingayi kubanjiswa kukugubungela iinwele ezinde.
Ukuhamba rhoqo kweShih Tzu
IShih Tzu kufuneka ibhrashiwe yonke imihla, kwaye ishedyuli yakho yokuzilolonga kabini ngeveki kufuneka ibandakanye izipikili kunyeukucoca amazinyo. Bahlambe ubuncinci rhoqo kwiiveki ezimbalwa, nangona izinja zokubonisa ziya kuhlanjwa rhoqo ngeveki. Yonke indawo yokuhlambela kufuneka ibandakanye ukucoceka ngamehlo abo nasezindlebeni, nangona inja yakho ihlala ikhupha ngamehlo, unokufuna ukuyicoca rhoqo.
UShih Tzu Ukuzilolonga kwePuppy
Ngenxa yokuba inja yakho iya kufuna ukuzilolonga rhoqo ebomini bayo bonke, ishih Tzu injana yeseshoni yokuqala yokuzilolonga kufuneka ibe mnene kwaye iyonwabisa kumntwana. Ngokungafaniyo nabantu abadala, awufuni kuhlamba injana ngaphambi kokuzilungisa xa besebancinci. Ukuhlamba kukukhetha uShih Tzu ukuzilolonga iinyanga ezintathu ukususela kumhla wokuzalwa kwabo.
Ukucocwa kwe-DIY Shih Tzu
Abanini abaninzi beShih Tzu bakuthola kulula ukuthatha inja yabo bayiyise kumkhwenyana oqeqeshiweyo, kodwa ngokuqinisekileyo kubiza imali encinci ukuyenza ekhaya, kunye noxinzelelo lwenja. Ukuze wenze lo msebenzi kuya kufuneka ube nezixhobo ezifanelekileyo. Isixhobo esisisiseko sokuzilungisa iShih Tzu kufuneka ubuncinci sibe:
Iibrashi ezimbini -Yenye eguqukayo kunye nebrashi ethe tyaba
Ikama elinamazinyo acocekileyo kwaye arhabaxa kwiiphelo ezingafaniyo
Izikere zokucheba izipikili
Ukucoca indlebe kunye namehlo
Iitawuli namalaphu okuhlamba
Izinto ezongezelelweyo onokuzibandakanya kwikhithi yakho ukuba uthatha isigqibo soku:
UKUYA fafaza uncamathiselo yebhafu yakho okanye isinki yetephu
UKUYA i-nail dremel
Umgubo wesitayile (ukuba unqumle isikhonkwane ngokukhawuleza)
Isomisi seenwele esenzelwe izinja
Itafile yokuzilungisa kunye / okanye a Ukuthintela ukuzilolonga
Izixhobo zeenwele ezifana neerbhoni
Abanye abanini beShih Tzu bakhetha ukusebenzisa izixhobo zombane. Ukuba ufuna ukufunda ukwenza umyeni uShih Tzu kunye neziqhotyoshelweyo , ayinzima kangako kwaye inakho ukwenza ukuzilolonga kube lula ngakumbi . Kuba uza kusebenzisa isixhobo esitsha esinokoyikisa inja yakho ngenxa yengxolo kunye nokungcangcazela, qala kancinci kwaye ubhangise ingxolo kunye nokuhamba kwesilungisi ngokudumisa, ukuphatha, nayo nayiphi na into eyonwabela inja yakho. Sebenza ngokumnciphisa kumacandelo acothayo kwaye usoloko uhamba ngesantya inja yakho ekhululekile kuyo.
Ukufumana iSinqumleli esifanelekileyo seShih Tzu yakho
EyakhoInja iya kukuthandaUkufumana ukusika okuhambelana nemozulu yangoku kunye nemihla ngemihlaIirejimeni zokuzilolonga. Thetha neyakhoisicoci sezinjamalunga nokubukeka kakuhle kweShih Tzu yakho kwaye ubuze malunga neendlela onokuba nobuchule ngazo!
Ukunikewa Izipho Zomntwana Ukulawula Your Credit I-Custom And Handcrafted Jew Jewelry Malunga Izacholo Organic Ukulima Ne Gadi
Ngaba i-styrofoam imbi kokusingqongileyo
Eyona ndlela ilungileyo yokucoca ifanitshala yeenkuni ezindala
zingaphi iimovie ze-shrek ezikhoyo
ixabisa malini inkawu njengesilo-qabane
indlela yokwenza isihluzo samanzi
Izimvo zesipho seminyaka eli-1 zokuba nesoka